DHAGEYSI XASAASI : Maxaa ka socda Jiidaha dagaalka G Sool & Wariyaasha oo ku sugan. – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Madax ka tirsan Somaliland oo si adag uga hadlay khilaafka u dhaxeeya Somalia & Kenya 8 hours ago
Madaxweyne caan ah oo xil uusan u qalmin wiil uu dhalay u magacaabay 10 hours ago
Wasiir ka tirsan dowladda Somalia oo codsi u diray madaxda Koonfur Afrika 10 hours ago
Home 2018 May W.Gudaha, Wararka Maanta DHAGEYSI XASAASI : Maxaa ka socda Jiidaha dagaalka G Sool & Wariyaasha oo ku sugan.
DHAGEYSI XASAASI : Maxaa ka socda Jiidaha dagaalka G Sool & Wariyaasha oo ku sugan.
TUKARAQ(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya Jiidaha dagaalka ee gobalka Sool ayaa sheegaya in ay hadda ay dhacayso rasaas goos-goos ah oo ka socota jiidaha hore ee ciidamada Puntland & maleeshiyada Somaliland ay shalay ku dagaalameen.
Ilaa hadda wariyaasheena kusugan jiidaha dagaalka ayaa cadeynaya in lafilayo in uu bilowdo dagaal toos ah oo u dhaxeeya Puntland & Somaliland, kaas oo maanta u muuqan doona kii ugu weynaa ee abid dhexmara.
Guutooyin kamid ah ciidamada Difaaca ee Puntland ayaa aroornimadii hore gaaray deegaano cusub oo kamid ah aagaga dagaalka, waxaana la maqlayaa hubka culus oo dhamaan si wadajir ah uga dhacaya Jiidaha dagaalka.
RIIX HALKAAN SI AAD U DHAGEYSTO CODKII u DAMBEEYEY
2 thoughts on “DHAGEYSI XASAASI : Maxaa ka socda Jiidaha dagaalka G Sool & Wariyaasha oo ku sugan.”
Garaad sool May 16, 2018 at 7:45 am · Edit
Dagaalku wa dhacaya wana soconya ila niinka iidor ugu danbeya oo kusugan sool an kharajiino.
omar May 16, 2018 at 8:39 am · Edit
waar dagaal waa faaiidolaawe ee isdaya